एमालेले सोध्यो मन्त्री बनेका अजय शाहीलाई स्पष्टीकरण - Rastrakokhabar
एमालेले सोध्यो मन्त्री बनेका अजय शाहीलाई स्पष्टीकरण
काठमाडौं, २९ साउन । नेकपा (एमाले)ले गठबन्धनलाई सघाएको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशका सांसद्लाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । एमाले प्रदेश संसदीय दल लुम्बिनी प्रदेशले सांसद् अजय शाहीलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो । २०७४ साल मंसिरमा भएको निर्वाचनमा परासी पश्चिम जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १(ख)बाट सूर्य चिन्ह लिई विजयी भएका शाहीले बिहीबार मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको मन्त्रिमण्डलमा बिनाविभागीय मन्त्रीका रुपमा शपथ लिएका छन् । मन्त्री बनेका शाहीलाई एमाले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले सूर्य चिन्ह लिई विजयी भए पश्चात नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकमा भाग लिने र आफ्ना गतिविधिहरु गर्ने गरेको भएपनि केही दिनयताका शाहीका गतिविधिहरु दल र दलका हितविपरीत सञ्चालन भइरहेको जनाइएको छ ।
शंकर पोखरेलका विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव टेबुल गर्ने बैठकमा अनुपस्थित हुने दलको निर्णय र ह्विप उल्लङ्घन गरी बैठकमा किन भाग लिएको भन्दै शाहीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । “२०७८ साउन २७ गते असंवैधानिक हिसाबले संविधानको भावना र मर्मविपरीत प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको बैठक समावेदन गर्न र त्यसमा प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री मा. शंकर पोखरेलका विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव टेबुल गर्ने बैठकमा अनुपस्थित हुने दलको निर्णय र ह्विप उल्लङ्घन गरी बैठकमा किन भाग लिनुभयो ? सरकारको विरुद्धमा ल्याएको अविश्वासको पक्षमा किन हस्ताक्षर गर्नुभयो,” स्पष्टीकरण पत्रमा सोधिएको छ ।
नेकपा एमालेको संसदीय दल विधानको परिच्छेद–५ को धारा २१ को उपधारा क, ख, छ र उ बमोजिम तपाईंलाई किन कारबाही नगर्ने ? भन्दै शाहीलाई प्रश्न गरिएको छ । यसको चित्त बुझ्दो जबाफ ३ दिनभित्र आफैँ दलको कार्यालयमा उपस्थित भई दिन अन्याथा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने पत्रमा उल्लेख छ ।
हृदयेश त्रिपाठीनिकट शाहीले आफू सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेपनि स्वतन्त्र सांसद् रहेकाले गठबन्धनमा सहभागी भएको बताएका छन् ।